Global Voices teny Malagasy » Ny ady sy ny fitantanana ratsy ary ny fiovaovan’ny toetr’andro ao Yemen no mahatonga ny tsy fahampian-drano · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Oktobra 2018 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Romy Haber Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Yemen, Ady & Fifandirana, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka
Miatrika krizin-drano henjana i Yemen, sehatra  iray amin'ireo krizy maha-olona manerantany ratsy indrindra: olona 16 tapitrisa no tsy afaka mahazo rano madio ao amin'ny firenena, araka ny voalazan'ny UNICEF.
“Inona no tena ratsy kokoa noho ny tsy fahazoana ny zo fototra maha-olombelona, rano?” hoy i Shoushou, tanora mpikatroka  avy any Sana'a renivohitra, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Anisan'ireo tanàna 10 tsy ampy rano indrindra manerantany i Sana'a ary atahorana ho tratry ny maintany afaka taona vitsivitsy . Mampiasa rano 95 isanjato latsaka noho ny ampiasain'ny mponina any Etazonia ny Yemenita.
Tsy isalasalana fa nisy fiantraikany tamin'ny loharano ny telo taonan'ny ady satria nokendrena hatrany ireo siniben-drano sy fantson-drano. Tamin'ny volana febroary 2016, nisy tatitra  nilaza fa nidaroka baomba sy nanimba siniben-drano izay namatsy rano fisotro ho an'ireo Yemenita 30.000 ireo fiaramanidina Saodiana. Nitranga fotoana fohy taorian'ny fanapoahana baomba ny orinasa goavana iray tao an-tanànan'i Mokha , izay voalaza koa fa nataon'ny fikambanana notarihan'ny Saodiana.
Na dia miha-ritra tanteraka aza ny rano ambanin'ny tany, toa miha-maina hatrany ny toetr'andro any Yemen. Tamin'ny taona 2009, naminavina ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO) fa i Yemen no firenena voalohany manerantany mety ho ritra tanteraka ny loharano ambanin'ny tany .
Efa lafobe ny vidin-drano ao amin'ny firenena, mandoa 30 isan-jato mahery amin'ny fidiram-bolan'izy ireo mba hanana rano ampidirina ao an-tranony  fotsiny ny olom-pirenena tsotra. Sarany lafo indrindra manerantany.
Satria miha-lalina ny krizy, mandray ny loharano ho toy ny fitaovam-piadiana ireo mpiady. Nanakana hatrany ny fitsinjarana ireo fanampiana maha-olona  toy ny sakafo sy rano na ny tafika tohanan'ny Houthi na ny tafika Saodiana, nahatonga ireo Yemenita ho tsy manan-tsafidy ankoatra ny mitahiry rano betsaka araka izao azo atao, izay matetika lasa maloto ny rano.
Niteraka valanaretina kôlerà tao Yemen ny tsy fahampian'ny fitehirizan-drano, valanaretina izay hita fa mora miparitaka sy miely be indrindra . Satria olona ahiahiana  voan'ny kôlerà maherin'ny 1,1 tapitrisa no voarakitra nanomboka tamin'ny Aprily 2017, ary 2 300 mahery no namoy ny ainy.
Mampitandrina ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba ny Fahasalamana fa mety hitranga ny andiany faha-telo amin'ny kôlera  taorian'ny andiany roa lehibe tato anatin'ny taona vitsy.
Miteraka fanamby amin'ny fitsaboana ny fandehanana any amin'ny toeram-pitsaboana: tamin'ny taona 2017, olona teo amin'ny 17 tapitrisa teo no tsy nahazo tolotra ara-pitsaboana fototra  tao Yémen. Amin'izao fotoana izao, dia 45% monja amin'ireo toeram-pitsaboana ao amin'ny firenena no miasa.
Fampiononana hatrany ho an'ny olona ao #Yemen  noho ny fanafihana tao amin'ny hôpitaly Al-Thawra ao #Hudaydah , ny tombatombana voalohany dia 14 no namoy ny ainy ary 30 naratra (mety mbola hiakatra ireo isa ireo arakaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha).
Ny tetikasa #سقيا_1000 ‬ dia mikendry ny hanome rano maimaim-poana ho an'ireo izay tena mila izany indrindra. Natomboka ny volana Novambra 2017, mikendry ny hameno sinin-drano 1000 ao an-drenivohitra Sana'a sy ny manodidina azy izany. Nahatratra ny tanjony izy ireo tamin'ny Febroary 2018. Manome tombontsoa ho an'ny fianakaviana 6194 na olona 39 789 ny tetikasa ankehitriny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/15/127153/
 lahatsary avy amin'ny Positive Yemen : https://www.facebook.com/positiveyemen/videos/835743483300663/
 olona 16 tapitrisa no tsy afaka mahazo rano madio : https://www.unicef.org/yemen/reallives_12680.html
 Shoushou, tanora mpikatroka: https://www.instagram.com/queenshshah/
 atahorana ho tratry ny maintany afaka taona vitsivitsy: https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-23777176/yemen-facing-water-shortage-crisis
 ny orinasa goavana iray tao an-tanànan'i Mokha: https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/12/01/update-bombed-water-desalination-plant-al-mocha-yemen/
 Yemen no firenena voalohany manerantany mety ho ritra tanteraka ny loharano ambanin'ny tany: http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/327460/
 mandoa 30 isan-jato mahery amin'ny fidiram-bolan'izy ireo mba hanana rano ampidirina ao an-tranony: https://www.reuters.com/article/yemen-water-crisis/rising-water-price-hits-yemenis-shortage-may-become-bigger-problem-than-war-experts-say-idUSL5N0Z43TL20150629
 Nanakana hatrany ny fitsinjarana ireo fanampiana maha-olona : https://www.reuters.com/article/us-yemen-war-saudi-un-idUSKCN0VP2Q6
 valanaretina izay hita fa mora miparitaka sy miely be indrindra: https://www.unocha.org/story/yemen-fastest-growing-cholera-epidemic-ever-recorded-brings-number-cases-895000
 olona ahiahiana: http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/week_26.pdf?ua=1
 Yemenita iray ao anatin'ny 62 : https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/aug/10/bombed-bin-trucks-breeding-bacteria-dirty-water-yemens-cholera-explosion
 olona ahiahiana 60 hatramin'ny 70 : http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/04/c_137442158.htm
 mety hitranga ny andiany faha-telo amin'ny kôlera: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-cholera/who-warns-of-new-yemen-cholera-surge-asks-for-ceasefire-to-vaccinate-idUSKBN1KO18R
 no tsy nahazo tolotra ara-pitsaboana fototra: https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/FF_updated_13092017.pdf
 mpikatroka Yemenita : https://www.instagram.com/amoory.200/?hl=en